मैले सशुल्क एसईओ सेवाहरूको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ?
दुई प्रायः सोधिने प्रश्नहरू छन् "एसईओ सेवाहरूको कितना भुगतान गरिन्छ?" र "पहिलो एसईओ नतिजाहरू हेर्न कति लामो समय लाग्छ?" यदि मान्छे यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, यो राम्रो कारण बिना होइन. यो खोजी इन्जिन अनुकूलन को मूल्यांकन गर्न को लागी यो एक आसान कार्य छैन सशुल्क एसईओ सेवा को लागि अंतिम लागत को कारणहरु को संख्या मा निर्भर गर्दछ. एसईओ को लागत पनि सम्भावित पुरस्कार संग सम्बन्धित छ, र उद्योग जहाँ तपाईं आफ्नो व्यापार को प्रचार गर्न चाहते हो - networking company in san jose california. सशुल्क एसईओ सेवाहरूको लागि मूल्य अनुकूलन (ग्लोबल, राज्य, देश, शहर, शहर वा माइक्रो क्षेत्र) को आकारको कारण पनि फरक हुन सक्छ।. यो कारक, निस्सन्देह, तपाइँको अनौठो परिस्थितिको लागि SEO को मूल्यमा प्रभाव पार्नेछ.
आज, म खोज इन्जिन अनुकूलन को माध्यम ले कार्बनिक खोज को लाभ को देखने को लागि एक स्पष्ट स्पष्टीकरण दिन को लागि "कितना एसईओ सेवाहरु को भुगतान को खर्च को?" चाहे तपाईं ठूलो उद्यम वा स्थानीय व्यापारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो मार्गदर्शकले तपाईंलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्नेछ कि तपाईंको लगानीले जैविक खोजीमा कस्तो देखिन्छ.
कस्ता कारकहरू सशुल्क एसईओ सेवाहरू निर्धारण गर्न सक्छन्?
तपाईको SEO मान निर्धारण गर्दा तपाइँलाई विचार गर्न आवश्यक तीनवटा प्राथमिक चरहरू छन्. सबै भन्दा पहिले, यो एक स्थिति हो (तपाइँ भौगोलिक रूपमा आधारित हुनुहुन्छ), उद्देश्यहरू (तपाइँका व्यवसाय लक्ष्यहरू के हो?) र समयरेखा (तपाइँ कति छिटो सुधार गर्न चाहनुहुन्छ?). सबै एसईओ एजेन्सीहरूलाई यी कारकहरू खातामा लगाउँदा गणना गर्दा तपाईंको व्यापारको लागि कति सशुल्क एसईओ सेवाहरू खर्च गर्नुपर्छ. यसको अर्थ छ कि ग्राहकको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर व्यापारको उद्देश्यहरू बुझ्न र आवश्यक समयरेखा निर्धारण गर्ने, एक खोज इञ्जिन अनुकूलन कम्पनीले मूल्यको गणना गर्न सक्दछ।. साथै, तपाईंको बजार आला भुक्तानी एसईओ सेवाहरूको लागत निर्धारण गर्नेछ. यदि तपाईं नयाँ नेतृत्वसँग सम्झौताबाट $ 200 भन्दा बढी कमाउनुहुन्छ भने, यदि तपाईं सम्भावित ग्राहक हजार डलरको लायक छ भन्दा कम तिर्न चाहानुहुन्छ।. किनकि एसईओ विशेषज्ञहरूले लगानीमा फर्किनुमा सोच्न सक्छन्, तपाईंको बजार आलाले समान हदसम्म मूल्य विनियमित गर्न सक्दछ. मूल्य उच्च हुन सक्छ यदि एसईओ एजेन्सीलाई अद्वितीय स्थिति र व्यवसायको विशेष लक्ष्यहरूको अनुकूलन रणनीति अनुरूप गरिनेछ.
सशुल्क एसईओ सेवाहरूको लागि सामान्य लागत
तपाईंलाई बजेटको योजना बनाउन सहयोग पुर्याउनको लागी, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाइँ अनुकूलन सेवाहरूमा कति खर्च गर्नुपर्नेछ. यहाँ तीन आधारभूत भुक्तान मोडेल (मासिक / अनुबंध / परियोजना आधारित) अनुसार लागतको दायराको सर्वेक्षण हो।.
मासिक रेजिनर एसईओ सेवा लागत (1 9)
मासिक रिटेनर सेवाहरु को लागत लगभग $ 750 - प्रति महिना $ 5,000. यहाँ अनुकूलन सेवाहरूको लागी व्यवसाय आवश्यकताहरु को आकार र SEO एजेन्सी द्वारा प्रदान गरिएको सेवा को मात्रा मा निर्भर हुन सक्छ. सानो एसईओ कम्पनीहरू जुन सीमित मात्रा अनुकूलन सेवा प्रदान गर्दछ पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सीहरू भन्दा बढी किफायती मूल्यहरू छन्. प्रायजसो व्यवसायहरूले मासिक एसईओ सेवाहरू प्रति $ 2,000 र $ 5,000 बीच तिर्छन्.
अनुबंध भुक्तानी एसईओ सेवा लागत (1 9)
अनुबंध को लागि एक मूल्य को भुगतान एसईओ सेवाहरु चर हो. हालैको सुरुवात वेबसाइटहरु र डिजिटल मार्केटिङ क्षेत्र मा न्यु योर्कहरु लाई एक बिन्दु बिन्दु को रूप मा एसईओ सेवा को रूप मा चुन्नुहोस. यस्तो प्रकारका सेवाहरूले सबै आधारभूत अनुकूलन प्रविधिहरू, एनालिटिक्स र निरन्तर समर्थन वेबसाइट वेबसाइट मालिकहरूलाई प्रदान गर्दछ. अनुबंध एसईओ सेवा सामग्री विपणन सेवा (प्रति $ 0, $ सम्म प्रति शब्द), अडिट सेवा (प्रति परियोजना $ 500 देखि $ 8,000 सम्म), लिङ्क प्रोफाईल अडिट ($ 500 देखि $ 7,500 प्रति परियोजना), र SMM सेवा ($ 500- $ 3,500).
परियोजना आधारित मूल्य (1 9)
यस प्रकारको एसईओ को मूल्यको जटिलतामा निर्भर छ। परियोजना र वर्तमान वेबसाइट अवस्था. यदि एक निश्चित परियोजना को विशेष अनुभव र अनुकूलन सफ्टवेयर को आवश्यकता छ भने, सशुल्क एसईओ सेवाहरु को लागि एक मूल्य सूचकांक कम से कम 15%. धेरै परियोजनाहरु $ 1,000 देखि $ 30,000 सम्म खर्च हुन्छन्.
घण्टा परामर्श दर (1 9)
प्रति घंटा एसईओ परामर्श सेवा लागत देखि $ 50 देखि $ 300 प्रति घंटा.